Ukuphupha ngomhlambi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngaba ubone umhlambi weegusha okanye iinkomo ephupheni? Mhlawumbi kukwakho nomhlambi wee-yaks okanye ze-llamas? Olu phawu lwephupha lufuna ukukuxelela ntoni? Cinga ngephupha lakho, unike ingqwalaselo kwiinkcukacha. Ezi zibalulekile ekutolikeni ngokuchanekileyo amaphupha.
1 Uphawu lwephupha «umhlambi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Umhlambi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Umhlambi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umhlambi» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha "umhlambi" lifanekisela i-nostalgia yephupha ukulingana kwiqela kwaye ungowalo. Ufuna ukuthelekisa iinjongo zakho kunye nendlela yokuphila nabanye abantu.
Ukuba iphupha libona umhlambi weenkomo ephupheni, oku kufanekisela, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, ukonwaba nentuthuzelo el mundo vuka. Umhlambi onamafutha okanye ongondlekanga ufuzisela ephupheni. kugula ngokuphupha, kodwa mhlawumbi nangomntu osondeleyo kuye. Ukuba iphupha liziva lililungu leqela kwihlabathi lokuvuka, uphawu lwephupha kulo mxholo lunokubhekisa ngokucacileyo kwamanye amalungu eqela.
Umhlambi ephupheni ubonakalisa ephupheni ukuba ukwilizwe elivukayo. lo ndolozo kufuneka yoyise. Ukuba enye yezilwanyana ifuna ukushiya umhlambi ephupheni ngelixa itya edlelweni, oku kunganika iphupha uluvo lokuba ingathanda ukuphuma kwinkqubo yayo ekuvuseni ubomi kwaye inyanzelise ezayo izimvo.
Ukuba iphupha liwela ngokungakhathali emhlambini ngelixa ulele, ukutolikwa kwephupha ngokubanzi kuyakuxwayisa ngale meko yephupha ukuba ulumkele ukungxama. Kuya kufuneka ucinge ngononophelo malunga nekamva elikufutshane kwaye uqwalasele zonke iziphumo, ukuba kunokwenzeka, ngaphambi kokujongana nezinto.
Uphawu lwephupha «Umhlambi» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu lwephupha "umhlambi" lutolikwa kutoliko lwengqondo ngephupha njengeqela elifanayo, apho ilungu ngalinye kufuneka libaluleke kwaye lilungelelaniswe, kodwa kwangaxeshanye kufuneka libalasele. Ukuphupha oku kuthetha, ungathanda ukuba yinxalenye yoluntu, kodwa ungathanda eyakho umntu ngamnye ungalahli okanye unikezele.
Ngokwemigaqo yobungcali, oku kutolikwa kuthetha ukuba ukuphupha kunokusebenza kwaye kusebenze ngokugqwesileyo njengeqela. Nangona kunjalo, ukuba kuya kufuneka uthathe isigqibo ngokukhawuleza phantsi koxinzelelo lwexesha, ungahamba wedwa.
Umhlambi wezilwanyana ephupheni unokuqondwa ngokuchazwa kwengqondo ephupheni njengesilumkiso kulowo uphuphayo ukuba angangqinelani nombono oqhelekileyo ngaphandle kokugxekwa. Kuba ukuba yenzekile, ayinakwenziwa ngokukodwa. Kwakhona, uphawu lwephupha kule meko inokuba yile Iindawo zobuntu babonisa ukuba bakhokelwa yingqondo.
Ukuba iphupha uzibona ekhala ngomhlambi ephupheni, uphawu lwephupha apha lumfuzisela ukuba uhambelana kakuhle kwaye onwabile kwiqela. Akanamathelisi ukubaluleka okukhulu kubuchule bakhe obukhethekileyo kwaye unokuzibonakalisa kakuhle.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba iphupha liqhuba umhlambi phambi kwakhe ephupheni, ngenxa yoko kufuneka azi, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, ukuba uyathanda ukususa uxanduva kwihlabathi elivukayo okanye alinike abanye . Kuya kufuneka ukuba uzibuze ukuba kutheni le injalo kwaye ukuba awufuni kuyitshintsha le ndlela yokuziphatha.
Uphawu lwephupha «Umhlambi» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, umhlambi ufuzisela ephupheni inxalenye yokomoya ngaphakathi kweembono zonqulo zokuphupha. Indlela echanekileyo kukuthemba izakhono zakho kunye nemibono.